Home Wararka Lix Qof oo ku dhimatay Shil ka dhacay Gobolka Mudug
Lix Qof oo ku dhimatay Shil ka dhacay Gobolka Mudug
Maamulka gobolka Mudug ayaa xaqiijiyay in 6 qof ay ku dhimatay ka dib markii uu shil gaari Saaka ka dhacay Wadada u dhaxeysa degaanka Gawaan iyo sidoo kale degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
6 kale ayaa waxaa soo gaaray dhaawac, waxaana hadda socda Gurmad loo sameynaayo dadka ay waxyeelado soo gaartay ayaa sheegay in mid ka mid ah Saraakiisha Gurmadka deg deg ah ee gobolka Mudug.
Gaariga rogmay ayaa siday Shamiito, waxaana la sheegay in markii rogmanaayay in uu ku socday Xawaare Sare.
Previous articleUganda oo dalbatay in aan la dhimin Tirada Ciidamada Amisom ee Jooga Soomaaliya!!
Next articleXiiisad Al-shabaab iyo dad shacab ah udhaxeyso oo ka taagan G/Shabeellaha dhaxe
Saadaq Joon oo Shaqo joojin lagu sameeyay iyo Sargaal uu Feeray ka dibna Ilaaladiisu Jirdishay?
Rooble oo amray in la furo waddo muhiim ah oo xalay ay xireen ciidanka dowladda
Guddoomiye cusub oo loo magacaabay Hodan, kadib dilkii marxuum Dhagajuun
Jubbaland”Dastuurka In la dhameeystiro,waa la diidan yahay!!
Farmaajo’Hal Sano iyo Bar ka hor Majirin Qof wadani ah’!